Tartan Quraan oo ay Maaligalinayso Qadar oo Ka Furmay Muqdisho | SAHAN ONLINE
Tartan Quraan oo ay Maaligalinayso Qadar oo Ka Furmay Muqdisho
MUQDISHO -Tartan quraan akhris ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ka furmay magaaladda Muqdisho, waxaana furitaankiisii ka qaybgalay Ra’isul Wasaare Ku-xigeenka Federaalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed(Qadar), Culuma’udiin, Danjirayaasha Turkiga iyo Qadar.
Raiisal wasaare Ku-xigeenka oo ka hadlay furitaankii wuxuu ku dheeraaday muhiimadda uu qur’aanka Kariimka uu u leeyahay dadka iyo in la helo afkaar midaysan oo bulshada dhexdeeda ah si looga gudbo kala qoqobnaanta.
Wuxuu soo hadal qaaday fikradaha xagjirnimada ah iyo kooxo uu sheegay in diinta sida qaldan u adeegsadaan, kuwasoo banaystay dhiiga Muslimiinta,
“Marka hadii aynaan la imaan xadaarad, aqoon, fikir midaysan iyo siyaasad ku salaysan Islaamka laguna dhisin manhajkeenna waxbarasho,waxaan ku sii soconaynaa fikirro kala duwan oo qaarkeen ay dhiigeenna banaysteen, qaarna ay leeyihiin ka daaya,waa lagama maarmaan in aragtida la mideeyo laguna dadaalo in wada hadal la furo si loo saxo dadka qaldan maskaxiyan maadaama aan qori waxba lagu maquuninkarin”. Ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Tartankan oo ay so qabanqaabisay Wasaaradda Diinta iyo Owqaafta ee dowladda Federaalka, waxaa maalgalinaya hay’adda Qadar Charity ee dalka Qadar. madaxa Hay’adda Qadar Charity ee Soomaaliya Cabdi Nuur Xaaji Cali oo furitaankii tartanka ka hadlay wuxuu sheegay in dalka ay ka hirgeliyeen boqolaal xaruumood oo lagu barto dugsiyada qur’aanka.
Gabagabadii, Wasiirka Diinta iyo Owqaafta Dowladda Soomaaliya Xasan Macalin Xuseen ayaa balanqaaday in abaalmarinno la siidn doona ardayda ku guulaysta tartanka.
“Tartankan Qur’aan aqriska ah wuxuu socon doonaa muddo hal isbuuc ah,waxaana la qaban dhoonaa markii uu dhamaado xaflad ballaaran oo ay ka soo qaybgali doonaan madaxda sare ee dalka,waxaana lagu bixin doonaa abaalmarino”. Ayuu yiri Wasiir Xasan Macallin.
Magaalooyinka Hargaysa iyo Garoowe waxaa sidoo kale lagu qabtay Tartano Quraan, kuwasoo abaalmarino lagu guddooniiyo dhalinyarada kaalimaha hore ka gala tartanka, waxaana abaalmarinada bixiya madaxda dowladaha Puntland iyo Somaliland.